सिन्त्रामा भयानक आगलागी : आगो नियन्त्रण गर्न १०० भन्दा बढी फायर फाइटर तैनाथ ( भिडियो सहित् ) - VOICE OF NEPAL
सिन्त्रामा भयानक आगलागी : आगो नियन्त्रण गर्न १०० भन्दा बढी फायर फाइटर तैनाथ ( भिडियो सहित् )
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:५७
201 ??? ???????
सिन्त्रामा भएको भयानक आगलागी भएको छ। आगो नियन्त्रण गर्न १०० भन्दा बढी फायर फाइटरहरु तैनाथ गरिएको छ।
सिन्त्राको तपदा दास मर्चेसमा शुरु भएको आगो प्रचण्ड गर्मी र तेज हावाका कारण तिब्र गतिमा चारैतिर फैलिदैछ। आज शुक्रवार बिहान शुरु भएक आगलागी निरन्तर बढ्ने क्रममा छ। आगो नियन्त्रण गर्न थप हवाई फायर फाइटर प्लेन समेत तैनाथ गरिएको छ।
हुरीका बहावले आगो आगो तपदा दास मर्चेसको म्याक डोनाल्ड नजिकै पुगेको छ। त्यहाँ धेरै नै व्यवासायिक प्रतिष्ठानहरु छन्। आगो नियन्त्रणमा आउन नसके निकै ठुलो क्षति हुने फायर फाइटरका एक कमान्डरले बताएका छन्।
पोर्चुगलको विभिन्न ठाउँमा भएको आगलागी नियन्त्रण गर्ने क्रममा हालसम्म ४ जना फायर फाइटरहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन्।